Igbo, John: Lesson 078 - Iwu ọhụrụ maka ụka (Jọn 13:33-35) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 078 (The Greeks seek Jesus' acquaintance)
20 Ma ndi-Grik di n'etiti ndi rigoro ikpọ isi ala nye oriri ahu. 21 Ya mere ndi ahu biakutere Filip, onye Betsaida nke Galili, we jua ya, si, Onye-nwe-ayi, ayi nāchọ ihu Jisus. 22 Filip biara gwa Andrew, nye kwa ya Filip. gwara Jizọs. 23 Jisus zara ha, si, Oge hour eruwo ka ewe nye Nwa nke madu otuto. 24 N'ezie, n'ezie, asim unu, Ọ buru na ọka wheat adighi n'ala, ọ nwua, ọ nọ nání ya. Ma ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ na-amị ọtụtụ mkpụrụ.
Ndị Gris na ndị Juu gbakọtara na Jeruselem; ha abiawo maka Ememe Ngabiga site na mba ndi Gris. Mgbe ìgwè mmadụ ahụ ji obi ụtọ nabata Jizọs dị ka Eze, ndị Grik masịrị ya. N'ihi ya, ha kpebiri ịmara ya nke ọma. Enwere ọchịchọ nke mba dị iche iche na arịrịọ a. Mgbe Filip na-ekwu na Grik na-asụ Grik, ọ kwetara ka Andrew na enyi ya na-agwa ha okwu. Ndị na-eso ụzọ abụọ ahụ bịakwutere Jizọs, nwee mwute dị ukwuu n'ihi na ha hụrụ mkpụrụ mbụ nke ndị ga-abịakwute Jizọs site na ndị Jentaịl. Ọ pụrụ ịbụ na ha chere na ịgbaga n'ala ndị Gris ga-abụ ụzọ dị ize ndụ nke na-adakwasị ha n'etiti ndị Juu na-eme ihe ọchị.
Jizọs ghọtara echiche ha, dịka ọ chịkọtara ọchịchọ nke mba dị iche iche na arịrịọ ndị Gris rịọrọ ya. O zipuru otu okwu di nkpa nke ekwesigh ighota nke oma, ma obu ihe ndi mmeri, ma obu ibu amuma nke ozioma John, "ugbua ka Nwa nke madu we nye otuto". Oge awa abiara ka ewe bulie ya elu, oge ah nke eluigwe na ala naeme anya gaabia nso.
Ma ihe ijuanya di ebube; mmeri na agha, ijichi ọchịchị ike abụghị ihe ịrịba ama nke ebube Jizọs. John adịghị edekọ nnwogha ahụ n'ugwu dị elu, n'ihi na ọ dịghị eche na nke a dị ka ebube dị mkpa. Otú ọ dị, ọ na-ekwu banyere njikọ nke ebube Kraịst na ọnwụ ya. N'ebe ahụ, n'obe, anyị na-ahụ isi nke chi ya nke bụ ịhụnanya.
Jizọs kpọrọ onwe ya ọka wit, mkpụrụ nke sitere n'eluigwe na-ada n'ala, iji mee onwe ya ka ọ ghara ịdị ọcha ma gosipụta ezi omume na ebube. Jizọs dị ebube. Ọnwụ Ya na-edo anyị nsọ, ndị na-emebi iwu, ka anyị wee nwee ike ịkekọrịta na ebube ya. Ọbịbịa ndị Gris kpalitere oku na-enye obi ụtọ, dịka o gosipụtara na ọ na-akpọ ndị si ná mba nile. Ọ ga-eme ka ha nwee ebube mbụ ya. Otuto ahụ ga-abanye n'ime okike nanị site na obe.
25 Onye nāhu ndu-ya n'anya gālafu ya. Onye nākpọ nkpuru-obi-ya asì n'uwa nka gēdebe ya rue ndu ebighi-ebi. 26 Ọ buru na onye ọ bula nējerem ozi, ya som. Ebe m nọ, n'ebe ahụ ka ohu m ga-anọ. Ọ buru na onye ọ bula nējerem ozi, Nnam gāsọpuru ya.
Jizos negosi ayi na uzo nke onwu ya na iga n'iru n'ebube putara ndi neso uzo ya. Dika Okpara hapuru ebube ya, wepu onwe ya n'enye ihe Chineke iji zoputa madu, otua ka nzube ayi abughi ibu ma obu ndi mara aha, ma ayi g'enwe onwe ayi mgbe nile.
Na-enyocha onwe gị, ị hụrụ n'anya ma ọ bụ kpọọ onwe gị asị? Kraist kwuru na ọ bụrụ na ị chefuo onwe gị, wee jiri ikwesị ntụkwasị obi na-ejere Alaeze ya ozi, ị ga-enweta ndụ Chineke. Ị ga-echekwa mkpụrụ obi gị maka ndu ebighi ebi. Site na okwu ndị a, Jizọs gosiri gị ọkwa nke ezigbo otuto. Adịla ndụ iji mee ihe na-amasị gị, ma ọ bụ ịbụ onye na-enweghị isi ma ọ bụ dị mpako, kama ịlaghachikwute Chineke na-ege ntị n'iwu Ya, na-achọ ndị ọjọọ na ndị rụrụ arụ ijere ha ozi, dị nnọọ ka o wepụrụ onwe ya ebube iji soro ndị na-akwa iko na ndị ohi nọdụ na tebụl. Na ikenye ndi nmehie dika ndi ozo n'ihi ozioma, ebube Chineke gabu n'idi ndu gi. Echela na ị dị mma karịa ndị ọzọ. Naanị Jizọs nwere ike ime ka gị na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe n'agbanyeghị nsogbu gị. Ngbanwe a na-abịa nanị site n'ịjụ onwe onye.
Jizos mere ka nke a doo anya mgbe o kowawara na ozi ayi maka ya bu ichota na iṅomi ya ma soro na ihe ojoo o nagide mgbe ufodu. Uzo abughi ihe mara nma n'adighi nma na nya isi; nke a abụghị ihe ndị na-eso ụzọ Kraịst kwesịrị ịtụ anya. Ha nwere ike ịjụ ajụ, iro, mkpagbu ọbụna ọnwụ. Ị dị njikere ịta ahụhụ n'ihi aha ya? Ọ kwere nkwa, "Ebe m nọ, n'ebe ahụ ka ohu m ga-anọ." Jisos agawo n'ihu gi n'uzo nke nkpagbu, ya na gi no. Ebube doro anya abụghị isiokwu nke ndị ohu Kraịst na njem a. Obi ụtọ anyị adịghị eme ihe na-atọ anyị ụtọ, kama ọ bụ inyere ndị nọ ná mkpa aka. A na-asọpụrụ aha Kraịst n'àjà nke ndị na-eso ụzọ ya. A na-eto aha Nna ahụ ka anyị wee dị ka Ọkpara Ya.
Dị nnọọ ka Kraịst nọ ọdụ taa n'ocheeze Nna ya, ya na ya dị n'otu na mkpakọrịta zuru oke na otu, otú ahụkwa ka ndị a kpagburu taa n'ihi ya ga-adị ndụ ma sonyere Nna ha nke eluigwe. Ukwu a bụ ihe omimi. Kedu ihe ị chere ga-abụ nsọpụrụ nke Nna ga-enye ndị ohu Ya hụrụ n'anya? Ọ ga-eme ka onyinyo Ya dị n'ime ha, dị ka ọ dị na okike. Karịa nke a, ọ ga-adakwasị ha na njupụta nke Mmụọ ya. Ha ga-aba ama dika Okpara ya, n'ihi na aba onye mba n'etiti amanne. Ruo mgbe ebighi ebi, ha na Nna ya ga-anọ n'eluigwe (Ndị Rom 8:29; Mkpughe 21: 3-4).
EKPERE: Anyị na-ekele gị, Onyenwe anyị Jisos, n'ihi na i nweghị afọ ojuju iji nweta ebube gị, ma wepụ onwe gị ịdị ukwuu gị. Anyị na-efe gị maka ịdị umeala n'obi dị otú ahụ, na-ekpe ekpere ka ị nwere onwe anyị ị nwere afọ ojuju na nganga anyị ka anyị wee mara nnwere onwe nke Mmụọ Nsọ na-enye gị iji jeere gị ozi marakwa ịhụnanya gị na ndụ anyị.
Gịnị mere ọnwụ Kraịst ji dị ka ebube nke eziokwu ahụ?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:27 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)